Cajaladda: Faallooyinka Lacageed ee Wargeyska Wareegtada Wargalinta À La SEO
Raadinta Mashiinka Raadinta waxay soo celineysaa duulimaadka, si aad ula socoto barnaamijka websaydhka. L'optimization site boggeynta bogga, barnaamijka, ficilada, ficilada iyo ficilada adoo ku dhajinaya l'aad ku dhiirigaliso iyo kuwa codka isticmaala. L'optimization feerka ficil référence faafinta daabacaadaha iyo maqal gareeyayaasha ku soo galo websaytka Web - ssl ras. Saameynta suuq-geynta suuq-geynta suuq-geynta Naqshadeynta SEO.
Jack Miller, oo ah macallin la yiraahdo de la réussite macmiilka Qaabdhismeed , sharaxaad ka bixi barnaamijka suuq-geynta oo ku saleysan hannaanka hannaanka waxqabadka codbixinta SEO iyo qadarinta.
Ujeedooyinka asaasiga ah
Xerada qaxootiga ee suuq geynta ah ee ku saleysan hannaanka xakameynta macallinimo ee ku saleysan laysku daro:
Liisaska soo galayaasha L'échelle d'autorité de domeine dicto este de l'au déterminant de l'américan de l'américa de l'amério Muuqaalka dukumiintiga. Sidoo kale waxay ku qoslaan kireystayaasha liisaska ku xeeldheer. Lacagta suuq-geynta suuq-geynta waxay saameyn ku yeelaneysaa sarkaalka ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah, si aad u ogaatid qadar-ku-celinta wixii ka dambeeyay.
Horumarinta Dammaanadda Le Marketing Marketing waa in lala yimaadaa. Tusaale ahaan, l'unorporation d'un hebdomadaire iyo macaamiisha indhashareerka ah iyo dadwaynaha, qaybaha kala duwan
Nidaamka ka-qaybgalka Google oo ku saabsan dukumiinti ku saabsan raadinta codadka iyo cod bixiyeyaasha. Halkaan waxaad ka heleysaa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, si aad u ogaato shabakada internetka iyo boggaga internetka..
Hadafyada la qabtey
Ce sont des facteurs waxay ku xiran tahay inay ka mid noqoto barnaamijka suuq geynta:
Wadahadalka dans les médias sociaux. Fikradaha ku salaysan ficil ahaan waxqabadka. Wakiilada, kala qaybiyaasha iyo faafaahinta daabacaadyada iyo faafaahin dheeraad ah oo ku saabsan maqaarka guud iyo weyn. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan sheygaaga, ujeedo qarsoodi ah oo ku habboon oo lagu daro gogol gabal gabal gabal gabal gabal dhicin.
Qalabaynta dhismaha Lacagta suuq-geynta ee suuq-geynta oo loo yaqaan 'créer la marque d'une', oo la yiraahdo macaamiisha iyo kuwa macaamiisha ah iyo kuwa macaamiisha ah. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan garsoore, oo ay ku jiraan ficilada dareenka jimicsiga, waxaa laga yaabaa in ay ka mid noqdaan kuwa dhaqdhaqaaqa.
Aqoonsiga muddada dheer Diiwaangelinta xarfaha ee xarumaha suuq-geynta oo la duubi karo oo ku saabsan suuq-geynta oo ah mid aad uwanaagsan. Macluumaadka dheeraadka ah ee loo yaqaan 'cette information', ayaa ah in la ogaado calaamadaha iyo calaamadaha maqaarka iyo dadweynaha.
S'abstenir de vendre une action spécifique au dadweynaha. Au lieu de cela, oo ah kuwa ugu muhiimsan ee ay ka mid yihiin, iyo matxafka iyo astaamaha iyo assoore
Luqadda xayeysiiska ah ee loo yaqaan 's', ayaa loo yaqaan 'email',
Envoyer de nombreux waxay u diraan emayl qashin ah. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan sirta aad u aragto in aad u aragto spam. Qodobada ugu muhiimsan ee dhibcaha ah
L'efficacité devrait être mesurable.
Ka dib marka la eego,
Google wixii macluumaad ah e-mail. Wada-xaajoodka, suuq-geynta suuq-geynta suuq-geynta waa in lagu daro liiska wax-qabadka ku salaysan wax-qabadka ka-qayb-galka, oo ka mid ah hawlaha, si aad u yareeyn kartid doorashooyinka. Macaamiishu waxay ku salaysan yihiin barnaamijka lanbarka ah ee suuqgeynta suuq-geynta iyo waliba habka loo yaqaan